Opening of Legal Year 2019 - Chief Justice Luke Malaba
Vanga vari mukuru wevatongi vematare edzimhosva muZimbabwe, VaLuke Malaba, havasisiri mutongi wematare edzimhosva sezvo vakaenda pamudyandigere pakati pehusiku hwapfuura sezvinodiwa nebumbiro remitemo yenyika ratambirwa nevana veZimbabwe muna 2013, dare repamusoro ratonga richidaro nhasi.
Vatongi vatatu vedzimhosva mudare repamusoro vanoti; Justice Happias Zhou, Justice Edith Mushore naJustice Jesta Charehwa, vati kuwedzerwa kwakaitwa makore ekuti VaMalaba varambe vari pabasa kunotyora bumbiro remitemo yenyika.
Mutongo uyu unoreva kuti zvakaitwa nemutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, zvekuwedzera nguva yaVaMalaba ivo vasvika panguva yekuti vaende pamudyandigere, zvinotyora bumbiro remitemo yenyika.
VaMnangagwa vakazivisa nemusi wehipiri kuti vakanga vawedzera nemakore mashanu nguva yaVaMalaba yekuti varambe vari pabasa.
Pasi pemitemo yenyika, VaMalaba, avo vakasvitsa makore makumi manomwe pakati pehusiku hwapfuura, havaifanirwa kuramba vari pabasa, zvinova zvatongwa nhasi.
Asi mutemo uyu wakavandudzwa zvechimbi chimbi mudare reSenate svondo rapera nebato reZanu PF richitsigirwa nedzimwe nhengo dzeMDC T inotungamirwa naVaDouglas Mwonzora izvo zvakaita kuti VaMnangagwa, vasaine bhiri iri kuva mutemo.
Mushure mekusaina Constitutional Amendment Bill Number 2 rakonzera muchokoto iri kuti rive mutemo, VaMnangagwa vakabva vawedzera nguva yaVaMalaba kuti varambe vachishanda kunyange hazvo vanga vachifanirwa kuenda pamudyandigere kutanga nhasi Chivabvu 15, 2021.
Hurumende, kuburikidza negurukota rezvemitemo, VaZiyambi Ziyambi, yakamboedza kuda kumisa kutongwa kwenyaya iyi nezuro ichiti vatongi vatatu ava vane kwavakarerekera panyaya yaVaMalaba, nokudaro, havafanirwe kutonga nyaya iyi.
Ukuwo Judicial Services Commission, JSC, yakapikisawo ichiti VaZhou havafanirwe kunge vari pabhenji panotongwa nyaya yaVaMalaba sezvo vaine zvido munyaya iyi.
Asi vatongi vatatu ava, VaZhou, Amai Mushore naJustice Charehwa, vakatsika vose madziro vachizviti vatongi vakakwana vasina divi ravakarerekera vakati nyaya iyi ngaienderere mberi ichitongwa vachibva varasa zvikumbiro zvaVaZiyambi neJSC.
Aka ndekekutanga nyaya yakadai ichipinda mudare kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga muna 1980.
Vanga vachipikisa zvakaitwa naVaMnangagwa, vanova sangano reYoung Lawyers Association of Zimbabwe pamwe neZimbabwe Human Rights NGO Forum, vaiti VaMalaba havafanirwe kuwana cheuviri pakuvandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika sezvo zvichityora zvimwe zvikamu zvebumbiro zvinorambidza kuvandudzwa kwemitemo kuitira kuti vatongi vematare vari pabasa, vawane cheuviri kubva mukuvandudzwa kwemitemo yenyika.
VaMalaba vakadomwa nevaimbove mutungamiri wenyika, muchakabvu Robert Mugabe, musi wa Kurume 27, 2017 kuva mutongi mukuru wematare edzimhosva zvichitevera kuenda pamudyandigere kwaVaGodfrey Chidyausiku. Panguva iyi VaMnangagwa vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika, vari zvakare gurukota rezvemitemo.
Panguva iyi, VaMalaba vaive mutevedzeri waVaChidyausiku, asi vakatanga kufanobata chigaro chemukuru wevatongi vematare edzimhosva musi wa Kurume 1, 2017.
Vakadomwa semutongi wedare repamusoro naVaMugabe muna 1994, vachishandira vari muBulawayo kusvika muna 2001. Pakadomwa VaMalaba kuva mutongi wedare reHigh Court, VaMnangagwa ndivo vaive gurukota rezvemitemo panguva iyi.
VaMalaba vakazosimudzirwa kuva mutongi weSupreme Court muna Nyamavhuvhu 2001, vakazoitwa mutevedzeri wemukuru wevatongi vematare edzimhosva muna 2008.
VaMalaba vanozivikanwa nemitongo yakawanda yakakonzeresa mitauro vakawanda vachiti yairerekera kuZanu PF.
Muna 2018, VaMalaba vakatungamira vatongi vedare reConstitutional Court mukurasa nyaya yemutungamiri weMDC Alliance, VaNelson Chamisa, avo vaiti vainge vakunda musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa mugore iri.
Gweta raVaChamisa panguva iyi, VaThabani Mpofu, rimwe remagweta anga achipikisa kwavanoti kutyorwa kwebumbiro remitemo yenyika izvo zvakazoita kuti VaMalaba varambe vari pabasa.